Home QORMOOYIN Maayar Cabdiraxmaan Solteco, Hargeisa Ma Helayso Shaqsi Uga Wanaagsan
Sida aynu wada ognahahay Maayar Cabdiraxmaan Caydiid Solteco, waa shaqsi horey loo soo tijaabiyey, lana soo arkay waxqabadkiisa iyo maamulkiisa labadaba.
Sidoo kale Mayor Solteco, waa shaqsi leh dulqaad, hoggaamin iyo maamul wanaag, waynu wada oganahay waxyaabaha muuqda ee uu caasimada ka qabtay mudadii uu ahaa duqa caasimada Hargeisa.
Bal u fiirso shaqsiyaad Hargeisa u sharaxan maanta, ka dibna barbar dhig Cabdiraxmaan Soltece, weli ma aan arag shaqsi aan odhan karo masuuliyada caasimada ayuu qaadi karaa ama waxaa uu ka soo bixi karaa masuuliyada ballaadhan ee maayarnimo, taasoo u baahan waayo-aragnimo iyo masuuliyad dheeraad ah.
Maanta cidda la soo tijaabiyey waa Cabdraxmaan Solteco, waana shaqsiga marlabaad lagu aamini karo maamulka caasimada Hargeisa oo ah mid ballaadhan, shaqsi cusub oo aan cidina garanayn sidee masuuliyada intaa leeg loogu aamini karaa? Jawaabtu waa laguma aamini karo.
Sidaa darteed waxaan muran ku jirin in caasimadu ay marlabaad ugu baahan tahay in uu soo noqdo Cabdiraxmaan Soltece, oo ah shaqsi la soo shirabay, wax weyna ka bedeli kara caasimada Hargeisa, waayo waxaa uu leeyahay waayo-aragnimo dheer, waxaa uu fahmayaa meelaha wax laga hagaajin karo, waxaa uu fahmayaa sida wadooyinka caasimadu ay u kala muhiimsan yihiin, waxaa uu hayaa qorshihii caasimada lagu hormarin lahaa.
Hadaba waxaan u soo jeedin lahaa bulshada caasimada in ay doortaan Cabdiraxmaan Solteco, kuna soo celiyaan maayarka caasimada marlabaad si loo dhamyastiro himilada iyo horuumarka caasimada somaliland ee Hargeisa shanta sanno ee soo socota.
Waxaan marlabaad ku celinayaa in shacabka Hargeisa ay codka ugu hiiliyaan maayar Solteco, isna sidii hore iyo si ka sii wanaagsan ayuu ugu adeegi doonaa mustaqbalka dhow.
Waxaa muhiim ah in bulshada Hargeisa aanay ku dawikhin hadalada aan meel fog jirin eek a imanaya raga cusub ee layliga ah oo ballan qaadyo aan jirin samaynayaa, waa in aad taageertaan maayarka dhab ta ah oo ah cabdiraxmaan Solteco.
Cabdilaahi Axmed, Hargeisa, somaliland
Hargeisa Ma Helayso Shaqsi Uga Wanaagsan
Maayar Cabdiraxmaan Solteco
Previous articleSidee baa lagu helaa farxada Iyo daganaashaha uu qof waliba raadinayaa
Next articleSideeda dal ee ugu dadka badan Islaamka oo midoobay